Domestic Medicines Cabinet အိမ်သုံးဆေးများ – Mawlamyine Daily
Domestic Medicines Cabinet အိမ်သုံးဆေးများ
Mawlamyine Daily	က်န္းမာေရး, အႏုပညာ	 August 31, 20202Minutes
မော်လမြိုင်၊ ၃၁ သြဂုတ် ၂၀၂၀
အိမ်သုံးဆေးများ၁။ ဝမ်းပိတ်ဆေး Loperamide (Imodium2mg)Imodium A-D, Anti-Diarrheal, Imotil, Diamode, Kao-Paverin, Kaopectate 1-D, Diarrhea စတဲ့ နာမည်တွေနဲ့ ရောင်းတယ်။ Lomotil ဆေးဟာ ဝမ်းသွားတဲ့ အကြိမ် အရေအတွက်ကို လျှော့မှာမဟုတ်ပေမဲ့ သွားတဲ့အားကို နည်းစေတယ်။ လူကြီး = ၂ တောင့်စသောက်ပြီး ၁ တောင့်ကို ဝမ်းတခါသွားတိုင်းသောက်ပါ။ တနေ့မှာ ၈ တောင့်ထက် မပိုစေရ။ ကလေး ၂-၅ နှစ် = 1 mg တနေ့ ၃ ကြိမ်၊ ကလေး ၆-၈ နှစ် =2mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ကလေး ၈-၁၂ နှစ် =2mg တနေ့ ၃ ကြိမ်၊ ကလေး ၂ နှစ်အောက် = မတိုက်သင့်။
၂။ ဗက်တီးရီးယား ဝမ်းကိုက်ရောဂါCeftriaxone 250 mg ကနေ2gm အထိ၊ တနေ့ တကြိမ်ကနေ ၂ ကြိမ်ခွဲပေးတယ်။ ၇-၁၄ ရက်။ ကလေးတွေဆိုရင် 50-100 mg/kg တနေ့ တကြိမ်ကနေ ၂ ကြိမ်ခွဲပေးတယ်။ ၇-၁၄ ရက်။ (သို့) Ciprofloxacin 500 mg ကို ၁၂ နာရီတခါ၊ ၅-၇ ရက်။ (သို့) Trimethoprim-sulfamethoxazole (Bactrim, Septrin) လူကြီး တခါသောက် ၂ ပြား၊ တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၅-၁ဝ-၁၄ ရက်။
၃။ (အမီးဘား) ဝမ်းကိုက်ရောဂါ• Metronidazole 750 mg တနေ့ ၃ ကြိမ်၊ ၅-၁ဝ ရက်။
၄။ အနာ-အဖျား-အရောင်ကျဆေးတွေ(၁) Paracetamol (acetaminophen) (ပါရာစီတမော) 325 MG ၂ ပြား၊ ၄-၆ နာရီခြား၊ တနေ့ (၂၄ နာရီ) အတွင်း ၁ဝ ပြားထက်မပိုရ။ 500 MG ၂ ပြား၊ ၆ နာရီတကြိမ်၊ တနေ့ (၂၄ နာရီ) အတွင်း ၆ ပြားထက်မပိုရ။
Paracetamol Syrup (120 mg/5 mL) (ပါရာစီတမော) အရည် ၂-၃ လအရွယ်၊ လစေ့မွေးထားတဲ့ကလေး၊ ၄ ကေဂျီကျော်ကလေး၊ ကိုယ်ပူတာနဲ့ ကိုယ်ပူတာ၊ နာတာတွေအတွက် 2⋅5 mL တကြိမ်၊ ဒါမှမဟုတ် ၄-၆ နာရီခြားပြီး နောက်တကြိမ်။ ၂ အောက်ကလေး မပေးရ၊ တနေ့မှာ ၂ ခါထက်ပိုမပေးရ၊ တခါနဲ့တခါ ၄ နာရီထက် မနီးရ၊၃-၆ လအရွယ်၊ ကိုယ်ပူတာ၊ နာတာတွေအတွက် 2⋅5 mL တနေ့ ၄ ကြိမ်၊ ၆-၂၄ လ အရွယ်၊5mL တနေ့ ၄ ကြိမ်၊ ၂-၄ နှစ် အရွယ်၊ 7⋅5 mL တနေ့ ၄ ကြိမ်၊ ၄-၆ နှစ်အရွယ်၊ 10 mL တနေ့ ၄ ကြိမ်၊ တနေ့ ၄ ကြိမ်ထက် မပိုစေရ၊ တကြိမ်နဲ့ တကြိမ် ၄ နာရီထက် မနီးစေရ၊ ဆရာဝန်ကမညွှန်ဘဲ ၃ ရက်ထက်ပိုမပေးရ။
(၂) Diclofenac (ဒိုင်ကလိုဖင်းနစ်) ရောင်တာ၊ ဖျားတာနဲ့ နာတာကိုသက်သာစေမယ်။ အရိုး-အဆစ် နာအတွက် Diclofenac 35-50 mg တနေ့ ၂-၃ ကြိမ်။ (သို့) 75 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်။ 100 mg တနေ့ ၁ ကြိမ်။ အဆစ်ခိုင်နာခြင်း 25 mg တနေ့ ၄ ကြိမ်။ ရာသီလာစဉ်နာခြင်း 50 mg တနေ့ ၃ ကြိမ်။ ရူမတွိုက်အဆစ်နာခြင်း 50 mg တနေ့ ၃-၄ ကြိမ်။ မိုင်ဂရင်းခေါင်းကိုက်ခြင်း 50 mg တနေ့ ၁ ကြိမ်။ ရိုးရိုးနာခြင်း 25 mg တနေ့ ၄ ကြိမ်။ 50 mg တနေ့ ၃ ကြိမ်။
(၃) Ibuprofen အိုင်ဘီယူပရိုဖင်ရာသီလာစဉ်နာခြင်း 200 to 400 mg ကို ၄-၆ နာရီခြား။ အရို-အဆစ်နာခြင်း 400 to 800 mg ကို ၄-၆ နာရီခြား။ ရူမက်တစ်အဆစ်နာခြင်း 400 to 800 mg ကို ၄-၆ နာရီခြား။ ကလေး ၆ လမှ ၁၂ နှစ်အထိ 30 to 40 mg/kg/day ကို ၄-၆ နာရီခြား။ ရိုးရိုးနာခြင်း 200 to 400 mg ကို ၄-၆ နာရီခြား။ ကလေး ၆ လမှ ၁၂ နှစ်အထိ4to 10 mg/kg ကို ၄-၆ နာရီခြား။ ဖျားခြင်း 200 to 400 mg ကို ၄-၆ နာရီခြား။ ကလေး ၆ လမှ ၁၂ နှစ်အထိ5mg/kg/dose ကို ၄-၆ နာရီခြား။
အနာသက်သာဆေးတွေကြောင့် အစာအိမ်နာဖြစ်တာကို ပျောက်စေဘို့၊ ကာကွယ်ဘို့နဲ့ ပြန်မပေါ်အောင် Cimetidine (Tagamet, Parenteral) 300 mg ထိုးဆေး၊ စားဆေး၊ တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ 400 mg စားဆေး အိပ်ယာဝင်။ Ranitidine 150 mg စားဆေး အိပ်ယာဝင်။ Omeprazole 40 mg တနေ့ ၁ ကြိမ် အစာမစားမီ၊ ၄-၈ ပါတ်။ Pantoprazole 40 mg တနေ့ ၁ ကြိမ် ၄-၈ ပါတ်။
၅။ ပိုးသန့်ဆေးတွေအဆင့် (၁) Dettol (ဒက်တောလ်) က ဆေးခန်းရော အိမ်တွေမှာပါ အသုံးအများဆုံးဖြစ်တယ်။ Chloroxylenol ပါတယ်။
အဆင့် (၂) Alcohol အရက်၊ Ethanol အရက်ပြန်၊ Isopropanol (70% Ethanol) ကို ဆေးရုံ-ဆေးခန်းသုံးခေါ်တယ်။ ဆေးမထိုးခင်၊ မခွဲစိတ်ခင် အရေပြားကို ပိုးသန့် ပေးတယ်။ အနာထဲ သွားမထည့်ရပါ။ သက်မဲ့ မျက်နှာပြင်တွေအတွက် မသုံးရပါ။ HIV ပို၊ ဘီပိုး၊ စီပိုးတွေအတွက် ပိုပြင်းတဲ့ (80% Ethanol + 5% Isopropanol) ကို သုံးရတယ်။ မှို၊ အခွံပါ (ဗက်တီးရီးယား) နဲ့ အသည်းရောင် (အေ) ပိုးတွေအတွက် အရက်ပြန်က အသုံးမကျပါ။
အဆင့် (၃) အိုင်အိုဒင်းကို Betadine, Povidone-Iodine နာမည်တွေနဲ့ လာတယ်။ ဆေးရုံ-ဆေးခန်းတွေမှာတော့ Iodine ကို Alcohol နဲ့ရောပြီး၊ 2% ကို သုံးရတယ်။ ဒိထက် ပြင်းရင် လောင်စေတတ်တယ်။ အရက်ပြန်လို အနာထဲမထည့်ရဘူး။ အနာဘေးက အရေပြားကိုသာ သန့်ပေးဘို့ သုံးရတယ်။ Tincture of Iodine (2-7% Sodium iodide or Potassium iodide) ခေါ်တာက (အိုင်အိုဒင်း) ကို Ethanol နဲ့ ရောထားတာ ဖြစ်တယ်။ Tincture of benzoin ဆိုတာက (အိုင်အိုဒင်း) မပါဘူး။ အနာသေးသေးတွေကို ထည့်တဲ့ဆေး။ (တိပ်)၊ (ပလာစတာ) တွေ ပိုကပ်စေအောင်လည်း သုံးနိုင်တယ်။ Povidine ဟာ ရေနဲ့ စပ်ထားတဲ့ Iodine 10% ဖြစ်ပြီး ပိုကောင်းတယ်။ ပြည်တည်နာတခုကို ဘယ်လောက် သေးသေး (အိုင်အိုဒင်း) မရှိရင်၊ မခွဲပါနဲ့။ မွေးစကလေးချက်ကိုထည့်နိုင်လို့ ကလေးအသက်ပေါင်းများစွာကို ကယ်နိုင်တယ်။
၆။ Antihistamines အင်တီဟစ်တမင်း (အလာဂျီ + အအေးမိ) အတွက်ဆေးပဌမမျိုးဆက်ဆေးတွေက Brompheniramine, Chlorpheniramine, Dimenhydrinate, Diphenhydramine, Doxylamine, Hydroxyzine, and Pheniramine တွေဖြစ်တယ်။ Doxylamine နဲ့ Dimenhydrinate တွေကို အအန်ပျောက်ဆေး၊ ကားမူးပျောက်ဆေးအဖြစ် သုံးတယ်။
ဒုတိယမျိုးဆက်ဆေးတွေကတော့ Cetirizine, Desloratadine, Fexofenadine, and Loratadine တွေဖြစ်တယ်။ (အလာဂျီ) အတွက်သုံးတယ်။ အအေးမိပျောက်ဆေး၊ ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးတွေထဲမှာ ပါတယ်။ အင်းဆက်တွေ ကိုက်တာမှာသုံးတယ်။ ဘယ်နေရာက ဘာလို့ယားယား ဒီဆေးဘဲ သုံးတာများတယ်။ လူကြီး ညအိပ်ကာနီး ၁ ပြား။ ၆ လမှ ၂ နှစ် = 2.5 mg တနေ့ ၁ ကြိမ်။ ၁၂ လအထက်ကိုလိုအပ်ရင် တနေ့ ၂ ကြိမ်။ ၂ နှစ်မှာ ၅ နှစ် = 2.5 mg တနေ့ ၁ ကြိမ်။ ၁၂ လအထက်ကို လိုအပ်ရင်5mg/day အထိတိုးနိုင်။ ၆ နှစ်အထက် =5to 10 mg တနေ့ ၁ ကြိမ်။
၇။ လေနာအတွက်ဆေးတွေအက်စစ်ဓါတ်ပျယ်ဆေးများ = Aluminium Hydroxide and Oxide, Magnesium Trisilicate 250-1500 mg တနေ့ ၃ ကြိမ်၊ Magnesium Carbonate, Magnesium Oxides, Magnesium hydroxide 200-400 mg တနေ့ ၃ ကြိမ်၊ Calcium Carbonate 1250-1500 mg တနေ့ ၃ ကြိမ်။
အက်စစ်အထွက်နည်းဆေးများ = Atropine Sulphate 0.5-1.0 mg IM ထိုးဆေး၊ Proton pump inhibitors (Omeprazole, Rabeprazole) 20-40 mg တနေ့ ၁ ကြိမ်၊ ၁ လ၊ ၁ လခွဲ သောက်ပါ။ Histamine H 2-receptor Antagonists (Ranitidine) 150 mg တနေ့ ၂-၃-၄ ကြိမ်။
အစာအိမ်အထွက်နေရာအနာဆေး = Cimetidine 800 mg အိပ်ရာဝင်၊ 300-400 mg အစာစားပြီးတိုင်း တနေ့ ၂-၃-၄ ကြိမ်၊ ၁ လ၊ ၁ လခွဲ သောက်ပါ။ သက်သာလာရင် ည 400 mg သောက်ပါ။ လတ်တလော အစာအိမ်နာဆိုရင် 800 mg အိပ်ရာဝင်၊ ဒါမှမဟုတ် 300 mg အစာစားပြီးတိုင်း၊ ၂ လသောက်ပါ။ အစာခြေရည်တွေ အထက်ဆန်တာဖြစ်ရင် 400-800 mg တနေ့ ၂-၃ ကြိမ်၊ ၁ လခွဲ သောက်ပါ။ ရင်ပူတာနဲ့ အစာမကျေဖြစ်ရင် 200 mg တနေ့ ၁-၂ ကြိမ်၊ အစာမစားခင် နာရီဝက်ကြို သောက်ပါ။ အန်တာအတွက် Metoclopramide 10-15 mg စားဆေး တနေ့ ၃-၄ ကြိမ်ပေးရတယ်။ ဗိုက်တအားနာရင် Buscopan, Hyoscine စားဆေး တနေ့ ၃-၄ ကြိမ်။ Diclofenac 25-75 mg စားဆေး တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ Spasmocip, Spasmonil, Spasmo-Proxyvon စားဆေး တနေ့ ၂-၃-၄ ကြိမ်။
First-aid kit ရှေးဦးသူနာပြုအိတ်1. Adhesive tape ကပ်သည့် ပလာစတာ၊2. Adhesive bandages ဆန့်နိုင် ကြုံ့နိုင်သော ပလာစတာလိပ်၊3. Anesthetic spray ထုံဆေးပန်းသည့် ဆေးပုလင်း၊4. Antibiotic cream (Povidone-Iodine, Burnol ointment, Iodine 2%)5. Antiseptic solution (Savlon, Hydrogen Peroxide) အနာ၊ ဒဏ်ရာတို့ကိုဆေးရန် ပိုးသတ်ဆေးရည်၊6. Bandages ပတ်တီးအရွယ်စုံ (၁ လက္မ၊ ၂ လက္မ၊ ၃ လက္မ၊)၊7. Blanket စောင်၊8. Calamine Lotion အယား သက်သာစေသော ဆေးရည်၊9. Cotton wool ဂွမ်းလိပ်၊10. Ethyl alcohol ဆေးခန်းသုံး အရက်ပြန်ပုလင်း၊11. First Aid manual လက်စွဲစာအုပ်၊12. Flashlight and extra batteries လက္ႏွိပ္မီး (ဓါတ္ခဲ)၊13. Forceps ရိုးရိုးဇာဂနာ (ညှပ်)၊14. Artery Forceps သွေးကြောညှပ် ဇာဂနာ၊ သွေးထွက်နေသည့် ဒဏ်ရာမှသွေးကြောအား ညှပ်ရန်၊15. Eye/Ear drop and ointment မျက်စဉ်း၊ နားထဲထည့်ဆေးရည်၊16. Gentian Violet မရမ်းရောင်ဆေးရည်၊ မီးလောင်နာ၊ လျှာနာအတွက် လိမ်းရန်ဆေး၊17. Handiplast အသင့်ကပ်နိုင်သော ပလာစတာ၊18. Hot-water bag ရေနွေးအိတ်၊ ခြေလက်များ အေးစက်နေသည့်အခါ၊ အနာအကိုက် သက်သာစေရန်၊19. Ice-water bag ရေခဲအိတ်၊ အဖျားတက်သည့်အခါ၊ ရုတ်တရက် ဒဏ်ရာရသည့်အခါ သုံးရန်၊20. Liniment လင်နမင် လိမ်းဆေးရည်၊ အဆစ်၊ အရိုး၊ ကြွက်သားနာခြင်းအတွက်လိမ်းရန်၊21. Gloves လက်အိပ်၊22. Safety pins ပင်းချိတ်၊23. Scissors ကပ်ကြေး၊24. Soap ဆပ်ပြာ၊25. Sterile gauze ပိုးသန့်ပြီးသား ပိတ်ကျဲစ၊26. Thermometer အပူချိန်တိုင်း ပြဒါးတိုင်၊27. BP apparatus သွေးဖိအားတိုင်းကရိယာ၊28. Triangular bandage သုံးဒေါင့်ပတ်တီး၊29. Domestic medicines အိမ်သုံးဆေးများ (ရှေးဦးသူနာပြုစုပေးမည့်သူ၏ ကြွမ်းကျင်မှုကိုလိုက်၍)30. Essential medicines မရှိမဖြစ်ဆေးများ (ရှေးဦးသူနာပြုစုပေးမည့်သူ၏ ကြွမ်းကျင်မှုကိုလိုက်၍)
Baby’s Medicine Cabinet ကလေးဆေးဘီရို
၁။ Zinc oxide cream ကို Diaper rash ဒိုင်ယာပါလောင်တာအတွက်သုံးနိုင်တယ်။
၂။ Hydrocortisone 1/2- or 1-percent cream ဆေးကို နို့ပွေးလို၊ နှင်းခူနာလိုအတွက်လိမ်းနိုင်တယ်။ ၇ ရက်ထက် ပိုမကြာသင့်။
၃။ Triple antibiotic ointment ပဋိဗီဝ ၃ မျိုးပါလိမ်းဆေးကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေအတွက်လိမ်းပေးနိုင်တယ်။
၄။ Petroleum jelly ဂျယ်လီကို နှင်းခူနာ၊ အရေပြားခြောက်နေတာအတွက် လိမ်းနိုင်တယ်။
၅။ Acetaminophen (Tylenol) ပါရာစီတမောအရည်ကို အနည်းဆုံး ၂ လအထက်ကလေးတွေ နာတာ ရောင်တာ ဖျားတာအတွက် ကလေးအသက်အရတိုက်နိုင်တယ်။
၆။ Ibuprofen (Advil, Motrin) ဆိုတာ Acetaminophen ဖြစ်တယ်။ အသက် ၄ လအထက်ကလေးတွေကို နာတာ ရောင်တာ ဖျားတာအတွက် ကလေးအသက်အရတိုက်နိုင်တယ်။
၇။ Decongestant ဆိုတာ နှာစေး ချောင်းဆိုးတာအတွက် အသက် ၄-၆ လအထက်ပေးနိုင်တယ်။
၈။ Cough suppressant ချောင်းဆိုးသက်သာဆေးလည်း နှာစေး ချောင်းဆိုးတာအတွက်ပေးနိုင်တယ်။ ၄-၆ လအထက် ပေးနိုင်တယ်။ Dextromethorphan ဆေးပါမယ်။
၉။ Simethicone (Mylicon) drops ဆိုတာ Gripe Mixture နဲ့ Gripe Mixture နဲ့ အတူတူဖြစ်တယ်။
၁ဝ။ Electrolyte solution ဆိုတာ ORS ခေါ် ဓါတ်ဆားထုပ်ဖြစ်တယ်။ ဝမ်းလျှောတာ အန်တာအတွက်ပေးတယ်။
၁၁။ Saline nasal drops နှာခေါင်းထဲအစက်ချ ဆားရေကို နှာခေါင်းခြောက်ပိတ်နေချိန်မှာသုံးနိုင်တယ်။
Medical and first-aid supplies ရှေးဦးသူနာပြုအသုံးအဆောင်များ
၁။ Medicine syringe or dropper ကလေးဆေးတိုက်စရာ ဆေးထိုးပိုက်နဲ့ ဆေးစက်ချစရာတွေ။
၂။ Bulb syringe and Nasal aspirator ဆိုတာ ကလေးနှာခေါင်းထဲက တခုခုဖြစ်ဖြစ် နှာရည်ဖြစ်ဖြစ် ချွဲဖြစ်ဖြစ် စုပ်ထုတ်စရာ ရာဘာဘူလုံးလေး။
၃။ Cotton swabs ဂွမ်းစအတံလေးတွေ နားကိုသန့်ပေးနိုင်တယ်။
၄။ Bandages အနေတော်ပတ္တီး။
၅။ Thermometer သာမိုမီတာ။
၆။ Nail clippers ကလေးလက်သည်းညှပ်။
၇။ Calamine lotion ယားတာ အင်းဆက်ကိုက်ခံရတာလိမ်းပေးနိုင်တယ်။
၈။ Rubbing alcohol ကလေးသုံးစရာတွေ မသုံးမီ သန့်ရှင်းပေးဘို့ အရက်ပျံ။
၉။ Antibacterial ointment ပိုးသေဆေးပါ လိမ်းဆေးတခုခုကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာအတွက်လိမ်းပေးနိုင်တယ်။
၁ဝ။ Baby shampoo or baby wash ကလေးသုံးဆပ်ပြာ။
၁၁။ Baby moisturizing cream အရေပြားခြောက်နေရင် လိမ်းနိုင်တယ်။